फूलको माग बढ्दो छ - अन्तर्वार्ता - नारी
फूलको माग बढ्दो छ
कुमार कसजू श्रेष्ठ /अध्यक्ष, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल
फूल खेती गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
आफूले कति लगानीमा व्यवसाय गर्ने भन्ने बारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सँगै बजार पनि बुझ्नुपर्छ । बजारमा कस्ता फूलहरूको माग छ त्यहीअनुसारको उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । फूल खेतीमा पानी महत्वपूर्ण हुने भएकाले पानीको अवस्था पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यावसायिक फूल खेतीमा महिलाको उपस्थिति कस्तो छ ?
फूलको बजार अवस्था कस्तो छ ?
माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । फूलको माग पनि मौसम र चाडपर्वअनुसार हुन्छ । रोज, लाहुरे, डाहलिया, गोदावरी, जर्बेरा, पिटुनिया, हेज, कार्नेसनजस्ता फूलको माग सधै हुन्छ । नेपाली बजारमा आवश्यक मात्रामा उत्पादन हुन नसक्नुमा जमिन, जनशक्ति एवं प्रविधिको अभाव मुख्य कारण हुन् ।
व्यावसायिक तालिम कहाँबाट लिने ?
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले फूल खेतीका लागि बेसिक र एडमान्स तालिम दिँदै आएको छ । व्यवसाय सुरु गर्न तालिमले सहयोग पुर्‍याउँछ । एसोसिएसनले देशव्यापी रूपमा तालिम सञ्चालन गर्छ । आफूलाई उपयुक्त हुने स्थानमा तालिम लिएर व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ । त्यस्तै सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त संस्थाहरूबाट तालिम लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
चैत्र १३, २०७६ - महिलामा बढ्दो धूम्रपान